Iindaba -Ummahluko ophambili phakathi kwephepha le-galvanized kunye ne-stainless steel sheet
Umahluko ophambili phakathi kwiphepha kwalenza kunye nentsimbi sheet
Ipleyiti yesinyithi ngesinyithi kukuthintela umphezulu weplati yentsimbi otyhidiweyo, kunye nokwandisa ubomi bayo obuluncedo. Umphezulu weplati yesinyithi uya kugutyungelwa ngumaleko wentsimbi, kwaye olu hlobo lwe-zinc lubambe ipleyiti yentsimbi ebandayo ebizwa ngokuba yipleyiti yesinyithi.
Isefu eshushu iqengqiwe imveliso yentsimbi inokusebenzisa kumashishini amaninzi ahlukeneyo:
1. Ukwenza amashishini afana nolwakhiwo lobunjineli, ishishini elilula, imoto, ezolimo, ukufuywa kwemfuyo, ukuloba kunye neenkonzo zorhwebo.
2. Ishishini lokwakha elifuna ukuvelisa iimveliso ezinganyangeki ukubola okanye ulwakhiwo kumzi mveliso ngombala wophahla lwentsimbi kunye nophahla lweGridi.
3.Nceda ishishini lokunyibilikisa isinyithi ukuba livelise isixhobo sendlu, itshimini yoluntu, izinto zasekhitshini, njl.
Umzi mveliso weemoto ekufuneka uvelise izinto ezithile ezinokumelana nemoto, njl.
Imisebenzi ephambili yezolimo, ukufuywa kwemfuyo kunye nokuloba kukugcina, ukuhambisa, nokuqandisa inyama kunye nokutya kwaselwandle, njl. Iinkonzo zorhwebo zibaluleke kakhulu ekugcineni nasekuhambiseni izinto, ukupakisha, njl.
Ipleyiti yesinyithi engenasici ibonisa ukumelana kwayo negesi, umphunga, amanzi kunye nezinye izinto ezinobuthathaka kunye neasidi, ialkali, ityuwa kunye nezinye izinto eziyimichiza ezonakalisayo. Ngokwenza oko, i-iron enganyangekiyo ukubola idla ngokubizwa ngokuba yipleyiti yentsimbi engenasici, kwaye intsimbi enganyangekiyo umhlwa ibizwa ngokuba yintsimbi enganyangekiyo.
Ipleyiti yentsimbi engenasici ihlala yahlulwe yangamacandelo aliqela, kubandakanya intsimbi ye-austenitic, intsimbi ye-ferritic, isinyithi se-ferritic, i-ferritic-metallographic (isigaba esiphindwe kabini) ipleyiti yentsimbi engenasici kunye ne-hardbottom ipleyiti yesinyithi. Ukongeza, ngokokuqamba, inokwahlulwa ibe yipleyiti yentsimbi engenamakhonkco ye-chromium, ipleyiti yentsimbi ye-chromium nickel kunye ne-chromium manganese nitrogen.